Toro-hevitra momba ny fiterahana
Inona no hany fomba tsy andrasan'ny olona amin'ny ady atao amin'ny tavy. Indraindray, ireo vola ireo dia mavesatra loatra mba hanatanterahana ny fepetra rehetra ilain-dry zareo mila hery sy fahasalamana tsara. Ary, ny tena manafintohina indrindra, ireo fomba ireo dia tsy manome foana ny vokatra iriana.
Na izany aza, afaka mihena ianao ary tsy misy ezaka be. Ny safidy mandresy fandresena hiadiana amin'ny lanjany dia manome antsika akupuncture .
Roa arivo taona lasa izay, ny mpitsabo Sinoa dia nahatsikaritra fa amin'ny fiantraikany amin'ny teboka sasany amin'ny vatana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fisehon'ny olona iray. Eo amin'ny vatan'ny olona tsirairay dia misy fiantraikany maromaro. Misy amin'izy ireo ny akupuncture hevitra momba ny fahavoan'ny fahavoazana.
Misy safidy roa azo itarihana azy ireo, ny fanasitranana sy ny fifehezana. Ny tsotra, mazava ho azy, ny voalohany. Na izany aza, zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny vokatra iriana dia azo raha tsy mifandray amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny akupuncture.
Betsaka ny hevi-dehibe mikasika ny fahavoan'ny lanjany dia eo amin'ny tongotra. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia Tszu-san-li. Ao amin'ny fahaketrahana kely eo ambany lohalika izy io. Ny fiantraikany amin'izany dia manampy ny fahaverezan'ny 500 grama isan'andro. Ankoatra izany, io teboka io dia tompon'andraikitra amin'ny faharetan'ny fahasalamana sy ny fahasalamana.
Fa eo am-pelatanany dia misy ny lanjan'ny fahaverezan-danja, izay azonao iharena ny tenanao tsy voafetra isa isan'andro. Tsindrio ny afovoan'ny faritra mafana indrindra amin'ny palmie eo ambanin'ny fanondro ny fanondro. Ny famonoana azy mandritra ny 2-3 minitra dia hampihena ny fialan-tsasatrao ianao ary hampihena ny dingan'ny metabolism .
Ny hevi-pinoana momba ny fatiantoka dia matetika miara-miaina amin'ny toeram-ponenana hafa mitovy amin'ny akupuncture, ary amin'ny roa milimetatra monja, dia mety hisy akony tanteraka tsy ampoizina. Izany no mahatonga azy tsy manolo-tena hiditra an-tsekoly irery. Ny manam-pahaizana iray ihany no mahalala tsara ny fomba hahitana ny teboka mahatsikaiky amin'ny fihenam-bidy.
Ny hevi-panafody dia manimba ny fatiantoka
Ny tononkira Sinoa fahiny dia nanambara fa ny fiantraikany betsaka amin'ny sain-dresaka dia eo amin'ny sofin'ilay olona. Amin'izany, ireo mpandraharaha maoderin'ny acupuncture dia miombon-kevitra tanteraka amin'izy ireo.
Ny fomba mahazatra indrindra amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany amin'ny teboka ireo.
Ny hevi-pamoretana momba ny lanjany eo amin'ny sofina dia tena tsy maharary sy tena mahomby, raha tena tena tompony izy.
Fikomiana Cascade - ny karazana fifadian-kanina malaza indrindra
Ny jogging maraina dia tsara.
Oolong tea ho an'ny fatiantoka
Lamba kely vita amin'ny lamba rongony
Ny fandefasana sigara dia OneTwoSlim
Fikarakarana fiterahana miaraka amin'ny fitsaboana ataon'ny vahoaka
Asidra asidra ho an'ny fahavoazana
Katie Holmes nandritra ny takarivan'ny gala iray tao amin'ny Museum of Modern Art dia naneho ny fifandraisany am-pitiavana
Sakafo cookie ao an-trano
Fikajiana sarimihetsika amin'ny efitranon'ny ankizy
Ahoana ny fomba hikarakarana tsara ny Spitz?
Orchid - fikarakarana, famindrana
Fanafody mamy amin'ny zaza
Efitrano fonenana misy koveta - trano mafana sy kanto
Ahoana no fijerena ny tsy fahombiazan'ny fo?
Kikombely miaraka amin'ny ketchup chili
Ny tosidra ambony ao amin'ny fitondrana vohoka